समाजलाई छाउगोठमुक्त नगर्ने जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा टिकट पाउँदैनन्ः मन्त्री गुरुङ (अन्तर्वार्ता) « Dainiki
१० असार २०७७, बुधबार १२:४४
गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुलुकभरिबाटै सबभन्दा बढी मतान्तरसहित दोलखाबाट निर्वाचित गुरुङका लागि पहिलो पटक आफ्नो कार्यादेश भएको क्षेत्रमा परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने अवसर र चुनौती दुवै उपलब्ध छन् । मन्त्री गुरुङसँग सिंहदरबारस्थित उहाँको कार्यकक्षमा सोमबार राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रकाश सिलवाल र कालिका खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरणः
कामका दृष्टिले मूलतः यो मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय नै हो भन्ने बुझिनुपर्छ । मैले मन्त्रीहरू र सांसद्हरूका बीचमा यसरी नै प्रस्तुत गर्ने गरेको छु । यसको नाम परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको बहस पनि उहाँहरूको बीचमा चलाएको छु । त्यसका लागि हामीले प्रस्ताव नै तयार गरेर जाने कि भन्ने पनि छ । सामाजिक क्षेत्रमा यस मन्त्रालयको प्रभावकारिता के हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । वास्तवमा हाम्रो अधिकार क्षेत्र खुम्चँदै गएको छ ।
यससँग जोडिएका कतिपय सामाजिक कार्य भने सङ्घीय मामिला वा गृह मन्त्रालयमा पुगेका छन् । कुनै मन्त्रालयसँग गाभिने मन्त्रालयका रूपमा छलफल चल्दा पहिले यसै मन्त्रालयलाई हेर्ने गरिँदो रहेछ । विगतमा गठबन्धन सरकारहरू बन्दा कुनै साना दललाई जिम्मेवारी दिने वा सत्ता समीकरणका लागि यसलाई उपयोग गर्ने काम हुन्थ्यो भनिन्छ । अब त्यस्तो हुँदैन । हामी यसका सेवा क्षेत्र र कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा विकसित गर्न खोज्दैछौँ ।
अहिले जसरी कोरोना महामारीको असर परिरहेको छ, यसको रोकथामका लागि सचेतना, सरसफाइ, उचित आहार–विहारका कुरा सामाजिक विकास र चेतनासम्बद्ध विषय हुन् । आखिर समृद्धिको सूचक भनेको भौतिक विकासका साथै मानवीय र सामाजिक विकास पनि त हो ! त्यसकारण यसका लागि बजेट विनियोजनको विधिमा पनि केही पुनरवलोकन गर्नैपर्छ । मैले जिम्मेवारी सम्हालेपछि यस मन्त्रालयको प्रोफाइल कसरी माथि उठाउने भनेर योजनासहित काम शुरु भएका छन् ।
यहाँ राष्ट्रिय निर्देशन ऐन (२०१८) मातहत दर्ता भएका संस्थाहरूको कुरा अलि बेग्लै रहेछ । तिनीहरूले राज्यलाई प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण बुझाउनु नपर्ने खालको देखिएको छ । सामाजिक सङ्घ÷संस्था ऐन, २०३४ र समाजकल्याण ऐन, २०३९ पनि छन् । अबको सङ्घीय संरचनामा यी तीन वटै ऐनलाई एकीकृत गरी सामाजिक विकास ऐन ल्याउने कार्यसूचीे आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको छ । नयाँ ऐन आएपछि पक्कै केही परिवर्तन हुनेछ र मैले मन्त्रालयबाट बिदाइ लिँदा यहाँ आउनका लागि मन्त्रीहरूको प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति होस् भन्ने मेरो चाहना छ ।
साठी वर्ष उमेर पुगेपछि समाजमा उहाँहरूको उपयोगिता सकियो भनेर आश्रममा राख्ने वा लगेर थन्काउने गरेका छौँ भने यो सोर्है आना गलत व्यवहार हो । यस्तो खाले सोचले समृद्ध पुस्ताबाट असल परम्परा, ज्ञान र अनुभव लिन हामीलाई अलग्याइदिन्छ । उहाँहरूलाई त्यसरी आर्यघाट लाने तयारी गरेजस्तो गरी अमानवीय रूपमा एक्ल्याउने होइन, समाज र परिवारमै क्रियाशील बनाइराख्नुपर्छ ।
उहाँहरूको जीवनभरको ज्ञान र सीपलाई सफलताका कथाहरूमार्फत समृद्धिका निम्ति उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । उहाँहरूलाई अपमान र हिंसा नहोस्, उहाँहरूको आत्मबल र स्वाभिमान बढोस् भनेर नै ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको प्रणाली शुरु गरिएको हो । अब हामीले वृद्धाश्रम पुर्याउने हैन, समाजमै ज्ञान केन्द्र, ध्यान केन्द्र र मिलन केन्द्र खोलेर उहाँहरुलाई सक्रिय तथा सुखी राख्नुपर्छ जहाँ एक प्रकारको दिवा स्याहार केन्द्रसमेत हुनेछ ।
अहिले पनि नेपालमा छाउगोठ छन् र त्यसका कारण हामी कलङ्कित भएका छौंँ । यस्तो प्राकृतिक विषयलाई पनि हामीले कलङ्कमा पु¥याएका छौंँ । त्यसो गर्नुभएन, मर्यादित महिनावारीको संस्कार बसाल्नुपर्छ । मानव बेचबिखनमुक्त, हिंसारहित नेपाल बनाउनुपर्छ । समय परिस्थितिअनुसार पाठ्यक्रम पनि परिमार्जन गराैँ । बालबालिकामा राष्ट्र, बाबुआमा र देशप्रेमको भावना जगाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडि भन्नुभएको थियो, ‘पुर्खाले लडेर देश बचाए, हामीले अडान लिएर बचाउनुपर्छ’ । यसरी जगाउने हो राष्ट्रिय भावना । राज्यको सयौँ रोपनी सम्पत्ति अहिले पनि व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तो हानिकारक अभ्यासलाई अन्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी आफैँ लाग्नुपर्छ ।
यो राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर नै नीति तथा कार्यक्रममै ल्याएका छौंँ । हामी यससम्बन्धी अध्ययन गर्छाैँ । विदेशमा रहेका यस्ता अभ्यास पनि हामी हेर्छौँ । कानून बनाएर स्थानीय तहमा सहजीकरण गरी यसको नमूना पनि दिन्छौँ । त्यहाँको स्रोत र साधन हेरेर हामी त्यो काम गर्नेछाैँ । रोजगारीको अवसरको सिर्जना पनि गर्नेछौँ ।
विश्वविद्यालयको ज्ञान र दक्षतालाई लिएर संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी प्रयास गर्नेछाैँ । मूल विषयका रूपमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी रहनुपर्छ । हाम्रा कतिपय विज्ञसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ । हामीलाई नयाँनयाँ अभ्यास चाहिएको छ ।
छाउगोठ नेपाली समाजको कलंकका रुपमा रहेको छ । यसबाट मुक्तिका लागि स्थानीय पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई परिचालन गरिएको छ । उनीहरूले आफ्नो समाजलाई छाउगोठमुक्त नगरे आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार टिकट नै नदिने निर्णय भएको छ । अबदेखि छाउगोठका नाममा कुनै पनि ब्यानरमा कार्यक्रम नगर्ने संकल्प गरिएको छ ।
छाउगोठ महिलाको एउटा ठूलो अपमान हो । प्राकृतिक कुरालाई लिएर यति ठूलो अपमान गर्न मिल्दैन । बरु उनीहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिऔंँ । स्यानीटरी प्याड बनाऔंँ । राज्यले अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ । मन्त्रालय महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने अभियानमा लागेको छ ।
कैलालीमा क्वारेन्टिनमा बलात्कारजस्तो अमानवीय घटना भयो । अरू ठाउँमा पनि घटना हुनेबित्तिकै हामी उद्धारका लागि पहल गर्छौँ । प्रहरीमा खबर गर्छाैँ र उद्धार पनि गर्छाैँ । नेपाली परम्परामा घटना भएपछि उद्धार गर्नेलाई समाजसेवा भन्छन् तर घटना हुनै नदिन के गर्ने भनेर हामीले पुरुषलाई समेत सहभागी गराउने अभियान शुरु गरेका हौंँ । यस्ता अमानवीय घटनाको मुहान कहाँ छ ? घटनाको स्रोत पत्ता लगाउनुपर्यो । अन्धविश्वास र अज्ञानका कारण समाजमा कतिपय हानिकारक अभ्यास पनि हुन सक्छन् ।
यो अध्ययन गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि हामीले महिला सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । किन अहिले पनि बलात्कार र आत्महत्याका घटना आइरहेका छन् ? रोजगारीका लागि विदेश जाने र आउने गर्दा उत्पन्न समस्या पनि अन्त्य गर्न जरुरी छ । समाजमा दिदीबहिनीको इज्जत लुटियो भन्ने समाचार सुन्नुभन्दा गाउँगाउँमा महिला उद्यमशीलता शुरु गरेर नेपालमै रोजगारीको सिर्जना गर्न जरुरी छ । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ । महिलालाई आर्थिक सशक्तीकरण गरेपछि यस्ता घटना आफैँ कम हुँदै जान्छन् ।
कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउनु जरुरी छ भनेर हामीले योजना बनाइरहेका छाैँ । क्वारेन्टिनमा रहँदा के गर्ने ? घर गएपछि के गर्ने ? दीर्घकालीन रूपमा के गर्ने भनेर रणनीति बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ ।
दुर्गम जिल्लामा अस्पताल नभएको, उचित सडकको व्यवस्था नभएको अवस्थामा हामीले विपन्न परिवारका लागिे आपत्कालीन उद्धार गर्ने गरेका छौ । महामारीमा १७ र जम्मा १०७ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार भएको छ । दुर्गमबाट हेलिकप्टर आउने भएपछि अवस्था कमजोर नै देखिन्छ । त्यस्ता महिलालाई पोषणयुक्त खानाका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि हेरिरहेका छौँ ।
चिल्लो सडकमा मगन्ते बसेको देखियो भने हाम्रो सामाजिक पक्ष कमजोर देखिनेछ । त्यसैले शैक्षिक र भौतिक सुधार मात्रले विकासको वास्तविक अर्थ वहन गर्दैन । भौतिक विकासका साथसाथै सामाजिक विकासलाई पनि महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्छ । हामीले थुप्रै अन्तरराष्ट्रिय सन्धिमहासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौंँ, उदाहरणका निम्ति महिला र बालबालिकासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिहरूका हामी पक्ष राष्ट्र हाैँ तर हस्ताक्षर गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । कार्यान्वयन भएन भने हाम्रो मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आउँछ । त्यसैले हामीले विचारपूर्वक कार्यान्वयनमै जोड दिन सक्नुपर्छ । कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संयोजनकारी संयन्त्रमा विशेष जोड दिने हो भने योजनाहरूका वान्छित परिणाम हासिल हुन सक्छन् ।